‘चन्द्रागिरिमा रहेका इँट्टाभट्टाका कारण ६ महिना बाँचिन्छ कि बाँचिदैन ?’ - Aarsha Khabar
‘चन्द्रागिरिमा रहेका इँट्टाभट्टाका कारण ६ महिना बाँचिन्छ कि बाँचिदैन ?’
अन्तर्वार्ता चन्द्रागिरि व्यक्ति विशेष
by Aarsha Khabar १६ कार्तिक २०७६, शनिबार November 3, 2019
चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका इँट्टाभट्टा हटाउन नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ ५ दिने अल्टिमेटम दिनुभयो, त्यो अल्टिमेटम १८ गते सोमबार सकिदै छ, त्यसपछिका दिनमा तपाईहरुको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?
चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका इँट्टाभट्टाहरु बन्द गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक र नयाँ दृष्टिकोणले नै परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा चन्द्रागिरि नगरपालिका ऐतिहासिक, सास्कृतिक र प्राकृतिक रुपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण नगरपालिका हो । खासगरी यो नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरको रुपमा विकास गराउन र सुन्दर हराभरा नगरपालिका निर्माण गर्नको लागि यहाँका जनताको चाहना र नगरपालिकाको निर्णय यसैसँग जोडिएको विषयबस्तु हो । चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र रहेका इँट्टाभट्टाको सन्दर्भमा २०७२ साल देखि नै नगरपालिकामा छलफल भएको र सर्वदलीय बैठकले समेत २०७२ भदौ १५ गते नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण इँट्टाभट्टाहरु बन्द गर्ने गराउने भनेर निर्णय गरिसकेको थियो । भूकम्पपछि यहाँका जनताहरुलाई तुरुन्तै इँट्टा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएपछि २ वर्षसम्म इँट्टाभट्टाहरु राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सम्झौता भयो । दुई वर्ष पनि वित्यो । त्यही बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु नगरपालिकामा आउनु भयो । नगर कार्यपालिकाको प्रस्तावमा नगरसभाले प्रदुषणयुक्त इँट्टाभट्टालगायतका उद्योगहरु नगरपालिकाबाट हटाउने भन्ने निर्णय गर्यो । निर्णयपश्चात नगरपालिकाले इँट्टाभट्टाहरु २०७६ श्रावण महिना भित्र नै बन्द गर्ने भनेर नगरभित्रका हरेक इँट्टाभट्टाहरुलाई पत्राचार गर्यो । पत्राचारपछि पनि इँट्टाभट्टाहरुले नगरपालिकालाई नटेरेको र नगरपालिका पनि कुनै एक्सनमा जान नसकेको अवस्था रहयो । यस्तो अवस्थामा हामीले पूर्व संघर्षरत विभिन्न पीडित समूह र ठाउँका साथीहरुसँग छलफल गरी इँट्टाभट्टा पिडित मूल संघर्ष समिति बनायौ र नगरपालिका भित्रका १४ वटै इँट्टाभट्टाहरु बन्द गराउनु पर्छ भनेर आवाज उठायौं ।
नगरपालिकाले इँट्टाभट्टा हटाउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकालाई नै सहयोग गर्ने हेतुले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन हामीले अभियान संचालन गर्यौ । त्यही क्रममा नगरपालिकामा जुलुससहित नगरप्रमुखलाई ज्ञापन–पत्र बुझायौं र वार्तामा बस्यौ । वार्तामा कार्यान्वयन गराउने जिम्मा वडा अध्यक्षको हो भनियो । जुन वडामा इँट्टाभट्टाहरु छन्, त्यो वडाको वडा अध्यक्षको काम भनेको नगरपालिकाको हरेक निर्णयलाई कार्यान्वयनतर्फ लानु हो । नगरप्रमुखले ज्ञापन–पत्र बुझ्दै तिहार अघि सम्भावना नरहेकोले चाडबाड सक्किनासाथ वडाका वडाअध्यक्षहरुलाई पत्र लेख्ने र नगरले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनको दिशामा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । हामीले ५ दिनको अल्टिमेटम पनि दियौं, ५ दिन भित्रमा इँट्टाभट्टा बन्द भएन भने हामी सशक्तरुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौ भनेर चेतावनी दिंदै वार्ता टुंग्यायौं । ५ दिनको बीचमा हामीले जनताहरुसँग, वडा अध्यक्षहरुसँग, माननीय सांसदहरुसँग सम्पर्कमा रह्यौ । यो अल्टिमेटम पश्चात बृहतखालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछौं ।
चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिका भित्रका जनताहरुले इँट्टाभट्टाको धुँवा र धुलोका कारण दिनदिनै मृत्युबरण गर्नुपर्ने समस्या आएको छ । त्यो समस्यासँग उहाँहरुको रोजगारी तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन । फेरी इँट्टाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरु पनि शतप्रतिशत नै केही न केही रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँहरुले श्रम गरेर पाएको पैसा उहाँहरुको स्वास्थ्यसँग साट्न सक्नु हुन्न ।
उहाँहरुले एक वर्षको समय दिनुहोस् भन्ने किसिमले फोन गर्नुभएको छ । इँट्टाभट्टाका संचालकहरु प्रति हाम्रो कुनै पनि किसिमको आग्रहपूर्वाग्रह पटक्कै छैन । हाम्रो विमति भनेको उहाँहरुले संचालन गरेका इँट्टाभट्टाबाट निस्कने धुँवा धुलोप्रति हो । मलाई लाग्छ उहाँहरुले पनि हाम्रो यो आन्दोलनलाई साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ ।
पहिलो हाम्रो अभियान भनेको जहाँ इँट्टाभट्टाहरु छन् त्यहाँका जनताहरुको घरदैलोमा पुग्ने हो । टोलटोलमा पुग्छौं, इँट्टाभट्टाबाट निस्कने धुँवा र धुलोबाट के–के समस्याहरु पैदा भएको छ त्यसको बारेमा हामी छलफल र बहस चलाउँछौं । इँट्टाभट्टा वरिपरिका जनताहरुले हामी साह्रै प्रताडित भयौं, सधै हाम्रा बालबच्चाहरु विरामी हुन्छन्, मुलतः बुढाबुढीहरु जसलाई फोक्सोको समस्या छ, उहाँहरु इँट्टाभट्टा बलिसकेपछि ५–६ महिना बाँच्न सक्नु हुन्छ कि सक्नु हुन्न भन्ने यही चिन्तामा छौ भनि उहाँहरु बताउनु हुन्छ ।
दोस्रो काम भनेको हामी बृहत तरिकाले यहाँका सांसद ज्यूहरु, दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, विज्ञहरु, पत्रकारहरु सबैसँग अन्तरक्रिया गर्ने योजनामा छौं । वातावरण सम्बन्धी विज्ञहरु ल्याई इँट्टाभट्टालगायत प्रदुषणयुक्त उद्योगले फाल्ने धुँवाबाट कुन कुन प्रकारका रोगहरु लाग्छ र त्यसबाट के–के बेफाइदाहरु छन् भन्ने बारेमा अन्तरक्रिया गछौं ।
तेस्रो काम भनेको माथि उल्लेखित दुई काम सम्पन्न भएपछि इँट्टाभट्टा पीडित मूल संघर्ष समितिको बैठक बसी सर्वपक्षीय ढंगले निर्णायक संघर्षको सुरुवात गर्नेछौं ।
ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै ५ दिनको अल्टिमेटम त दिनुभयो । तर, त्यो अल्टिमेटमको विषयमा कुनै ठूलो कदम भए जस्तो लाग्दैन, नगरप्रमुखसँग संघर्ष समितिको अपेक्षा के हो ?
चन्द्रागिरि नगरपालिका गठन भएपछि सर्वदलिय संयन्त्रमा बसी काम गर्दा घनश्याम गिरी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अहिले नगर प्रमुख हुनुभयो । हामीलाई आशा थियो कि उहाँ प्रमुख भएपछि नगरपालिकाले गर्ने सम्पूर्ण निर्णयहरु नयाँ जोश, उमंग र जागरका साथ नगरपालिकालाई समुन्नत नगरको रुपमा विकास गराउने र यो नगरपालिकालाई पर्यटकीय रुपमा संसारमा चिनाउने ढंगले उहाँ अगाडि बढ्नु हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर, त्यसो हुन सकेन । समाजमा नयाँ काम गर्ने नयाँ जोश, उमंगका साथ नयाँ चिज ल्याउने खालको नेतृत्व हुनुपर्छ । पहिला हामीले विरोध के लाई गर्थ्यौ भने निर्णय भएका कुरा कार्यान्वयन नहुँदा विरोधमा उत्रन्थ्यौ । अहिले पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा पुरानो प्रवृत्ति, पुरानो सोच र पुरानो कुराहरुबाट अलिकति पनि अगाडि बढ्न सकेनौ कि भन्ने लाग्छ । प्रमुख पनि त्यही पुरानो प्रवृत्तिकै बन्नु हुन्छ कि भन्ने डर लागेको छ ।
तपाईले आन्दोलनमा चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर निवासी सबै जनताको साथ र सहयोग पाउछु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?
म पूर्णरुपमा विश्वस्थ छु । जनताहरुले यो आन्दोलनमा पूर्णरुपले साथ दिनेछन् । यो आन्दोलन भनेको कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै पाटी र कुनै संघसंस्था विशेषको आन्दोलन होइन । यो जनताको मौलिक हकसँग जोडिएको र प्रत्यक्ष आफ्नै स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित विषय भएकोले आफ्नै स्वास्थ्यको लागि र सकारात्मक भावना पक्षमा पूर्ण साथ दिन्छन् । आफु र आफुपछिको पिढीको उज्ज्वल भविष्यको निम्ति सोच्ने कर्तब्य पनि त अभिभावकको हो । तसर्थ यो जनता केन्द्रीत आन्दोलन हो । चन्द्रागिरि नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका भित्रका जनताहरुको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पनि त हो यो । त्यसो हुनाले यहाँका सम्पूर्ण जनताहरु सहयोग, समर्थन र आन्दोलनमा सरिक भएर अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु । संघर्ष समिति भन्दा पनि अगाडि बढेर प्रदुषणयुक्त इँट्टाभट्टाहरु हटाउनको लागि आफै कम्मर कसेर आउनु हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्थ छु ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र १४ वटा इँट्टाभट्टा संचालनमा छन्, तपाई संघर्ष समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आन्दोलन चलाइ रहँदा इँट्टाभट्टा संचालकहरुले तपाईलाई आन्दोलन अघि नबढाइदिनुस् भनेका छन् कि छैनन् ?
मलाई फोन त धेरै ठाउँबाट आएको छ । यही नै व्यक्तिले यसैले फोन गर्यो भन्नु भन्दापनि उहाँहरुले एक वर्षको समय दिनुहोस् भन्ने किसिमले फोन गर्नुभएको छ । इँट्टाभट्टाका संचालकहरु प्रति हाम्रो कुनै पनि किसिमको आग्रहपूर्वाग्रह पटक्कै छैन । हाम्रो विमति भनेको उहाँहरुले संचालन गरेका इँट्टाभट्टाबाट निस्कने धुँवा धुलोप्रति हो । मलाई लाग्छ उहाँहरुले पनि हाम्रो यो आन्दोलनलाई साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ ।
बेरोजगारी देशको ठूलो समस्या हो । तपाईहरुको यो आन्दोलनसँगसँगै इँट्टाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरुको रोजीरोटी पनि सँगै खोसिदै छ, यो विषयमा तपाईहरुको ध्यान कतिको पुगेको छ ?
श्रमजीवि बर्गहरुले आफ्नो श्रम बेचेर परिवार पाल्ने गर्दछ । हामीले उहाँहरुको रोजगारलाई खोस्न खोजेको होइन । सूचना पाएसम्म इँट्टाभट्टा संचालकहरुले अन्य ठाउँमा पनि जग्गा लिएर इँट्टाभट्टा संचालन गर्दै छन् । उहाँहरुले श्रम गर्नुभएको छ, त्यो श्रम यहाँका १४ वटा इँट्टाभट्टामा नभएर अन्य ठाउँ र क्षेत्रमा पनि गर्न सक्नु हुन्छ । ५–६ महिनामा मजदुरहरुले जुन श्रम गरेर आफ्ना परिवार पाल्नु भएको छ त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण त चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिका भित्रका जनताहरुले इँट्टाभट्टाको धुँवा र धुलोका कारण दिनदिनै मृत्युबरण गर्नुपर्ने समस्या आएको छ । त्यो समस्यासँग उहाँहरुको रोजगारी तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन । फेरी इँट्टाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरु पनि शतप्रतिशत नै केही न केही रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँहरुले श्रम गरेर पाएको पैसा उहाँहरुको स्वास्थ्यसँग साट्न सक्नु हुन्न । मजदुर र यहाँका जनताहरुको स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो हो । उहाँहरुले श्रम अन्य क्षेत्रमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ । विकल्प त खोजिनु पर्छ ।
अन्त्यमा थप कुरा केही छन् कि ?
हामी प्रदुषण युक्त इँट्टाभट्टा बन्द हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका छौं । इँट्टाभट्टा पीडित मूल संघर्ष समितिको अध्यक्षको हैसियतले यो संघर्षलाई यहाँका जनप्रतिनिधिहरु, सांसदहरु, पत्रकारहरु, यहाँका विद्वान व्यक्तिहरु, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवीलगायत यहाँका सम्पूर्ण जनताहरुले समर्थन र सहयोग गर्नुपर्छ । आर्ष नेपालले चन्द्रागिरि नगरपालिका मात्र नभएर देशैभरीको जुन किसिमले खबर संप्रेषण गरेको छ त्यस अर्थमा आर्ष नेपाल जनताको आर्ष नेपाल हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यसको उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
तराईका जिल्लाहरुमा धुमधामका साथ छठ मनाइँदै
नेकपामा उपनिर्वाचनको उम्मेदवार चयनका विषयमा छलफल
थानकोट नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग शिलान्यासमा मेयरको अनुपस्थिति किन ?
‘राजनीतिक प्रतिशोधले मातातीर्थकाे जग्गा मुद्दा उठ्याे’
Aarsha Khabar February 19, 2020 February 19, 2020